Ahoana ny fomba hisafidianana ny lanjan'ny calibration?
Inona no tokony hojerentsika rehefa mila mividy lanjany isika? Misy teboka maromaro toy ny etsy ambany: 1. Araka ny maha-marina ny mizana / mizana izay ilainao hamboarina. Ny lanjan'ny kilasy avo lenta dia hanana ny marimarina kokoa, fa raha tsy suitalbe kosa dia mampiakatra ny vidiny fotsiny. Ary ny lanjan'ny kilasy ambany ...
Ny taloha sy ny ankehitriny an'ny kilao
Ohatrinona ny kilao? Nizaha io olana toa tsotra io ny mpahay siansa efa an-jatony taona maro. Tamin'ny 1795, namoaka lalàna iray i France izay nanondro ny "gram" ho "lanja tanteraka amin'ny rano ao anaty goba izay ny volany dia mitovy amin'ny zato metatra amin'ny mari-pana raha ny ic ...
Fenon-kazo milanja azo zahana - famolavolana vaovao mety amin'ny fivezivezena
Ny fitaovana JIAJIA dia faly milaza fa manana fahazoan-dàlana amin'ny famokarana sy ny fanaovana dokambarotra ny fidirana an-tsokosoko amin'ny alàlan'ny mari-pahaizana iraisam-pirenena ilaina rehetra izahay. .
Fiaraha-miasa amin'ny taona 2020
Jiajia dia nandray anjara tamin'ny fampirantiana indostrialy INTERWEIGHING tamin'ny taona 2020 indray. Noho ny valanaretina, na dia tsy afaka mandray anjara amin'ny hetsika indostrialy isan-taona aza ny namana iraisam-pirenena maro, dia mbola nampita ny fampahalalana ny fampiratiana tamin'ny mpanjifa rehetra tamin'ny alàlan'ny Internet, anisan'izany ny te ...
New Balance ho an'ny kalibration fandanjana
Taona miavaka ny 2020. COVID-19 dia nitondra fiovana lehibe teo amin'ny asa sy ny fiainantsika. Ny dokotera sy ny mpitsabo mpanampy dia nandray anjara betsaka tamin'ny fahasalaman'ny tsirairay. Nandray anjara mangina amin'ny ady amin'ny valanaretina ihany koa izahay. Ny famokarana sarontava dia mila fitiliana am-polony, ka ny filan'ny te ...
Ny lanjan'ny fikajiana ny refy, Calibration Mass, Lanja voamarina, Shear Beam Load Cell, Calibration lanjan'ny napetraka, Ny lanjan'ny fikajiana ho an'ny mizana nomerika,